Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Guddiga Dalxiiska Seychelles wuxuu ku dhawaaqay dib u habeyn lagu sameeyo howlaha
Guddiga Dalxiiska Seychelles wuxuu ku dhawaaqay dib u habeyn lagu sameeyo howlaha
Gudiga Dalxiiska Seychelles (STB) wuxuu ku dhawaaqayaa isbadalo kala duwan howlgalkooda dibada iyadoo la tixgalinayo aafada socda iyo saameynta dhaqaale ay kuyeelatay wadanka.
Suuqa Shiinaha, xafiisyada STB ee Hong Kong iyo Beijing ma sii shaqeyn doonaan labadan magaalo wax qabadkeedana waxaa laga sameyn doonaa xafiiska STB ee Shanghai.
Yurub gudaheeda, laga bilaabo Maarso 2020, xafiiska STB ee Faransiiska wuxuu ka guuri doonaa meesha uu hadda ku sugan yahay wuxuuna u wareegi doonaa dhismeyaasha ay degan yihiin Safaaradda Seychelles. Intaa waxaa sii dheer, xafiiska STB ee Talyaaniga ayaa la xiri doonaa ka dib markii uu howlgab noqday Agaasimihii Talyaaniga, Turkiga, Israel iyo Mediterranean, Mrs Monette Rose 1 January 2021. Wixii hadda ka dambeeya, STB waxaa wakiil ka noqon doona shirkad fadhigeedu yahay Rome oo ah Shirkadda matalaadda Goobaha, ITA Istaraatiijiyadda ITA oo ay madax ka tahay Ms Danielle Di Gianvito.
Iyadoo in ka badan 25 sano oo khibrad ah, Ms Danielle Di Gianvito waxay leedahay asal adag oo dhanka safarka ah; waxay la shaqeysay shirkadaha diyaaradaha iyo dhowr dalxiis oo caalami ah suuqyada Talyaaniga iyo Isbaanishka. Si loo xaqiijiyo sii socoshada iyo in la ilaaliyo xiriir dhab ah oo lala yeesho jasiiradaha Seychelles, Mrs Yasmine Pocetti - oo horey u ahaan jirtay Madaxa Suuqgeynta ee STB ayaa sidoo kale ku biiri doonta kooxda ITA Strategy srl waxayna ka shaqeyn doontaa koontada Seychelles.
Intaas waxaa sii dheer, xafiiska STB ee Boqortooyada Midowday wuxuu joojin doonaa dhaqdhaqaaqa jirka dhamaadka bisha Febraayo 2021. Sarkaalka Suuqgeynta ee xafiiska fadhigeedu yahay UK Mrs Eloise Vidot wuxuu ka shaqeyn doonaa guriga halka Agaasimaha suuqaas Ms Karen Confait ay saldhig ka dhigan doonto xarunta dhexe ee STB.
Agaasimaha STB ee Ruushka, CIS & Bariga Yurub, Mrs Lena Hoareau ayaa sidoo kale saldhiggeedu noqon doonaa xarunta dhexe ee STB.
Intaa waxaa sii dheer, illaa dhammaadka Febraayo 2021, xafiiska STB ee Koonfur Afrika sidoo kale waa la xiri doonaa, Agaasimaheeda, Ms Christine Vel waxay ka shaqeyn doontaa xarunta dhexe ee STB, halka Agaasimaha STB ee Koonfur Afrika, Afrika kale iyo Ameerika, Mr. David Germain wuxuu sii joogi doonaa South Africa isagoo joogtaynaya joogitaanka suuqa STB.
Mar ay ka hadlaysay isbeddelada ku yimid hawlgalada STB, Mrs Sherin Francis, Madaxa Fulinta ee STB waxay sheegtay in go'aanada ay salka ku hayaan dhimista kharashka laakiin ay isla waqtigaas sii hayaan kooxda.
“Kuwani waa waqtiyo adag oo soo foodsaaray warshadaha isbadelladoodana aan laga maarmi karin. Waa inaan raadino habab hal abuur leh si aan u ilaalino howlaheena ugana shaqeyno qiimo jaban.
Waxaan sidoo kale maanka ku haynaa in hadda in ka badan sidii hore, waa inaan hubinnaa inaan sii ahaano xitaa istiraatiijiyad badan oo bartilmaameed ah oo aan diirada saarno waajibaadkayaga, ”ayay tiri Mrs Francis.
Dabayaaqadii Nofeembar, Mrs Francis waxay lahadashay wada hadal dheer dhamaan shaqaalaha STB iyo la shaqeeyayaasheeda iyadoo sharaxaysa saadaalinta adag ee ururku wajahayo.
Nuqul laga soo saaray war murtiyeedkeeda ayaa u qornaa sidan:
“Tallaabooyinka la adeegsanayo ayaa ah in la hubiyo in marka hore STB ay mari karto sanadka, laakiin isla mar ahaantaana la ilaaliyo inta badan kheyraadkeeda yar; mid dad iyo mid dhaqaale labadaba si loogu soo kabto aakhirka dalka. Hubaal la’aanta inagu soo food leh waxay u baahan tahay qorshe iyo aragti fog inta aan qireyno inaan ku jirno xilli ay yartahay macluumaad ama xog nagu hagi kara. Si loo sarbeeyo sarbeeb fudud, sida caadiga ah, ujeeddada maareynta maaliyadeed ayaa ah in naloo diyaariyo maalin roob leh. Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen isku raaci karno in roobka maahmaahda ahi durba soo da'ayo maanta oo si adag u dhacaya. Ku guuldaraysiga inaad iibsato dallad, marka roobku da'o iyo goortaad wali awooddo mid, ma aha caqli-gal. Waa nacasnimo, ”ayuu yiri Madaxa Fulinta ee STB.
Isla war-murtiyeedka, Mrs Francis waxay sidoo kale muujisay mahadnaq ay u jeedinayso kooxdeeda gudaha iyo dibaddaba taageeradooda baaxadda leh iyo sii wadidda dadaallada xilliyadan adag. Waxay ku dhiirrigelisay qof walba inuusan niyad jabin oo uu sugo maalmaha qorraxda ee soo socda.